Iprofayile kaNacho Morato eIkaro
Injineli yezoRhwebo evela kwi-UPV (iYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia) igxile kulungiselelo lwezinto kunye nophando olusebenzayo kunye neliso lokuFunda ngomatshini. Ukuthanda i-DIY okanye indlela yokwenza ubomi.
I-electromagnetic sisixhobo esinepropathi yokufumana iimpawu zombane xa umbane udlula kwikhoyili yawo..
Ukwenza into eyenziwe ekhaya kulula kakhulu njengoko siza kubona ngoku. Ufuna nje ucingo lobhedu olwenziwa nge-enameled kunye nento enje ngondoqo okanye umzimba, into ye-ferromagnetic njenge-screw okanye iqhekeza lentsimbi.
Sinokwahlula izixhobo zibe ziintlobo ezintathu: i-ferromagnetic, i-paramagnetic kunye ne-diamagnetic kuxhomekeke kwindlela eziziphatha ngayo xa zenziwe ngemagnethi.
Yiyo ulingelo olulula kangangokuba lufanelekile ukwenza nabantwana kwaye babazise kwihlabathi lezenzululwazi nethekhinoloji.
Comanche nguJesús Maeso de la Torre
Ndiya phambili ukuba ndingumntu othanda kakhulu entshona, ndiyayithanda. UComanche uphumelele iMbasa yeSpartacus yeyona Noveli yeMbali yeMbali ka-2019 kwaye iyacetyiswa kakhulu.
Yinoveli, enenyaniso eyintsomi ngokuqinisekileyo, kwaye oku kukude kwithoni ye Ihashe eliCrazy kunye neCuster esisincoko esixela iinyani ngendlela ethembekileyo.
Apha ibali lijikelezwe kwiziganeko zokwenyani. Imishini, amadabi, njl njl, yinyani. Ubomi babalinganiswa abaphambili buyintsomi ngokucacileyo.
Ifumaneka eNew Spain kumashumi eminyaka okugqibela enkulungwane ye-XNUMX, xa uBukhosi baseSpain babulawula iMexico nento eyayiza kuba yiUnited States of America.
Ungaze xa sithetha bucala ngasekunene, sixela ixesha le-colonization yaseSpain, ngaphambi kokuba iikharavani ezidumileyo zabahlali esizibona kwiifilimu ziza kufika. Bendingazi ukuba amaSpanish ebekho, evula indlela, ekwalawula into eya kuba yi-United States of America, ukusukela kwinkulungwane yeshumi elinesine.
← sobuKristu Iphepha1 Iphepha2 Iphepha3 ... Iphepha57 Elandelayo →